Isikhangeli esincinci se-1.20 siza nokuphuculwa kweefestile ezinokuvela, iinjini zokukhangela ezingaphezulu kunye nokunye | Ubunlog
Ubumnyama | 23/06/2021 19:00 | Ukuhlaziywa ukuba 24/06/2021 00:58 | software
Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo ukukhutshwa kwe Inguqulelo entsha yewebhu eyaziwayo "Isikhangeli esincinci 1.20" apho ukuxhasa ukuphuculwa kweewindows ezivelelayo, imihlaba yegama eligqithisiweyo, iinjini zokukhangela zinikezelwe, kunye notshintsho oluninzi ukulungisa iimpazamo kunye nokuphucula ukuhambelana kweMin.
Imin ixhasa ukubrawuza kumaphepha avulekileyo ngenkqubo yesithuba ebonelela ngemisebenzi njengokuvula ithebhu entsha ecaleni kwethebhu yangoku, ukufihla iithebhu ezingafunekiyo (ezingafikelelwanga ngumsebenzisi ixesha elithile), amaqela eethebhu, kunye nokujonga zonke iithebhu kuluhlu.
Ulawulo oluphambili kwi-Min yibha yedilesi Ungangenisa imibuzo kwiinjini yokukhangela (ngokungagqibekanga kwiDuckDuckGo) kwaye ukhangele iphepha langoku.
Kukho izixhobo zokwenza uluhlu lwezinto oza kuzenza / amakhonkco onokwenza yokufunda kwangaphambili, kunye nenkqubo yokubhukisha enenkxaso yokukhangela kwisicatshulwa esigcweleyo. Umlawuli wenqanawa inenkqubo yokuthintela eyakhelwe-ngaphakathi (ngokwe-EasyList) kunye nekhowudi yokulandelela iindwendwe, kunokwenzeka ukuba ukhubaze ukukhutshelwa kwemifanekiso kunye nezikripthi.
1 Izinto eziphambili ezenziwayo ze-Min 1.20
1.1 Uyifaka njani i-Min 1.20 isikhangeli sewebhu ku-Ubuntu nakwiziphumo?
1.2 Ungasifaka njani isiKhangeli seMin kwiRaspbian kwiRaspberry Pi?
Izinto eziphambili ezenziwayo ze-Min 1.20
Kule nguqulo intsha yeMin 1.20 Iqaqambisa umsebenzi ophuculweyo xa kuvulwa iisayithi ezisebenzisa iivenkile ezivelelayo, Ngaphandle koko inkcazo yeendawo zokugqithisa iphuculwe kakhulu, ngaphandle kwalonto ujongano lokugcina ipassword luphuculwe kwaye lwala maxesha kwisikhangeli kunye nenketho eyongeziweyo yokukhubaza ugcino lwegama eligqithisiweyo.
Olunye uphuculo olubalaseleyo kule nguqulo intsha yile Ukuphuculwa kokuvula ikhonkco, kuba kwiinguqulelo ezidlulileyo bekukho iimpazamo xa befuna ukuvula ikhonkco kwisikhangeli.
Singayifumana loo nto iqhosha lokucima imbali longezwa kwi-interface yomkhangeli zincwadi idatha yokuhamba kunye neyendawo, kunye nenani leenjini ezinokusetyenziselwa ukuvelisa iingcebiso njengoko uchwetheza wandisiwe.
Yongeze amandla okumisa inkqubo yokulayisha xa ucinezela iqhosha lokubaleka.
Umnxeba owenziwe lula ujongano lokuhlela amanqaku ukusuka kumaphepha akwiibhukumaka.
Ngoku ungarhoxisa ukulayishwa kwephepha ngokucinezela iqhosha lokubaleka
Kwenziwe kwaba lula ukuvula umhleli weebhukumaka xa iphepha sele liphawulwe.
Gqibela ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngokusungulwa yale nguqulo intsha, unokujonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani i-Min 1.20 isikhangeli sewebhu ku-Ubuntu nakwiziphumo?
Kulabo abanomdla wokukwazi ukufaka le web browser kwiinkqubo zabo, bangayenza belandela imiyalelo ukuba sabelana ngezantsi.
Into yokuqala esiza kuyenza yintloko kwiwebhusayithi yakho esemthethweni apho siza kufumana ingxelo yokugqibela ezinzileyo yesikhangeli esingu-1.20.
Okanye, ukuba ukhetha unako vula itheminali kwindlela yakho (Ctrl + Alt + T) kwaye siza kuchwetheza lo myalelo ulandelayo:
Nje ukuba iphakheji ikhutshelwe, sinokuyifaka nomphathi wephakheji oyithandayo okanye kwisiphelo sendlela:
Kwaye ukuba unengxaki yokuxhomekeka, siyisombulula nge:
Ungasifaka njani isiKhangeli seMin kwiRaspbian kwiRaspberry Pi?
Okokugqibela, kwimeko yabasebenzisi beRaspbian, banokufumana iphakheji yenkqubo ngomyalelo:
Kwaye ufake kunye
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Isikhangeli esincinci se-1.20 siza nokuphuculwa kwezinto ezivelelayo, iinjini zokukhangela ezingaphezulu kunye nokunye